Akụkọ - Mmepe na -adigide bụ ihe ịma aka kamakwa ohere
Ihe nkwụsị sekit
Onye na -akpọ AC
Mmepe na -adigide bụ ihe ịma aka kamakwa ohere
Dị ka data si kwuo, Global Footprint Network na -ebipụta ụbọchị oke ibu gburugburu ụwa kwa afọ. Site n'ụbọchị a, ụmụ mmadụ ejirila oke akụ nke ụwa mepere emepe mepere emepe n'afọ ahụ wee banye mpekere gburugburu ebe obibi. “Daybọchị Ibu oke gburugburu ụwa” na 2020 bụ Ọgọst 22, nke karịrị izu atọ karịa afọ gara aga. Agbanyeghị, nke a bụ n'ihi na nzọ ụkwụ nke ụmụ mmadụ belatara ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga n'ihi mmetụta ọrịa na -efe efe, ọ pụtaghị na mgbanwe ihu igwe na -emetụta. Ọnọdụ ka mma.
Dị ka onye na-eri ike, onye na-emepụta ngwaahịa na ọrụ, yana onye ndu na teknụzụ ọhụrụ, ụlọ ọrụ nwere ọrụ ịkwalite mmepe na-adigide ma bụrụ otu n'ime ndị na-akwalite mmepe na-adigide. Dabere na "Nkwupụta nyocha banyere omume nke ebumnuche ebumnuche na -adịgide adịgide nke ụlọ ọrụ China" nke Mmemme Mmepe nke United Nations nyere, ihe dị ka 89% nke ụlọ ọrụ China ghọtara ebumnuche Sustainable Development (SDGs) wee ghọta na usoro mmepe na -adigide nwere ike ọ bụghị naanị. mụbaa uru nke akara ụlọ ọrụ ha, mana ọ nwekwara ike weta mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi.
Ka ọ dị ugbu a, mmepe na -adigide abụrụla otu n'ime atụmatụ dị mkpa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. "Enyi gburugburu ebe obibi", "mmụba nke mkpokọta", na "ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya" na -aghọ isi ihe dị na ụkpụrụ ụlọ ọrụ a na ọrụ azụmahịa, nke na -egosipụta na akụkọ kwa afọ ma ọ bụ akụkọ pụrụ iche iji bulie mmetụta ụlọ ọrụ na ọnụ ahịa akara.
Maka ụlọ ọrụ, mmepe na -adigide abụghị naanị ihe ịma aka, kamakwa ohere azụmahịa. Nkwupụta nke United Nations mere ka ọ pụta ìhè na ka ọ na -erule afọ 2030, uto akụ na ụba ụwa nke SDG na -akwalite ga -eru puku ijeri dọla iri na abụọ. Ijikọ na SDG na ọkwa usoro ga -ewetara ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ uru, dị ka imeziwanye arụmọrụ, ịbawanye njigide ndị ọrụ, ịkwalite mmetụta ika, na ịkwalite ikike njikwa ihe egwu nke ụlọ ọrụ ahụ.
"Na mgbakwunye na uru akụ na ụba, ụlọ ọrụ nwere ike nweta nkwado n'aka gọọmentị, ndị ọrụ, ọha, ndị na -azụ ahịa na ndị mmekọ mgbe ha na -eme mmepe na -adigide, na -eme ka ọ dị mfe ito. Nke a ga -agbakwa ụlọ ọrụ ume isonye na mmepe na -adigide wee malite mee ihe iji mepụta okirikiri dị mma. "
Post oge: Jul-02-2021
Ọchịchọ itinye ego ike na Middle Eas ...
Mmepe na -adịgide adịgide bụ ihe ịma aka bu ...
Belt na okporo ụzọ
Jiri obi ụtọ nabata IEK ileta ụlọ ọrụ anyị